17.03 Manaiky Azy
Ny sakafom-panahintsika anio Sabotsy 17 Marsa 2018 dia ny Apokalypsy 1.9-20, no teny hovakiantsika ka hojerentsika amin' izany ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy ? na ny Fanahy Masina ? sy ny hoe misy fampitandremana ve ao ? ary farany dia hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin'Andriamantra izao ?
9 Izaho Jaona, rahalahinareo sy namanareo amin’ ny fahoriana ary amin’ ny fanjakana sy ny faharetana ao amin’ i Jeso, dia tao amin’ ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin’ Andriamanitra sy ny filazana an’ i Jeso.
10 Voatsindrin’ ny Fanahy tamin’ ny Andron’ ny Tompo aho ka nahare feo mahery teo ivohoko, toy ny feon’ ny trompetra,
11 nanao hoe : Izay zavatra hitanao dia soraty eo amin’ ny boky, ka ampitondray ho any amin’ ny fiangonana fito, dia ho any Efesosy sy Smyrna sy Pergamosy sy Tyatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia.
13 ary teo afovoan’ ny fanaovan-jiro dia nisy Anankiray tahaka ny Zanak’ olona niakanjo akanjo lava hatrany an-tongony sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin’ ny tratrany.
14 Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon’ ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo;
15 ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano, hoatra ilay voadio teo amin’ ny fandrendrehana iny; ary ny feony toy ny firohondrohon’ ny rano be.
16 Ary nitana kintana fito teny an-tanany ankavanana Izy; ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany; ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin’ ny heriny.
17 Ary raha nahita Azy aho, dia lavo niankohoka tahaka ny maty teo anoloan’ ny tongony. Fa Izy nanendry ahy tamin’ ny tànany ankavanana ka nanao hoe : Aza matahotra; Izaho no Voalohany sy Farany,
18 dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita.
20 dia ny zava-miafina ny amin’ ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin’ ny fiangonana fito: ary ny fanaovan-jiro fito dia fiangonana fito.
Miara-mizaka sy mandray andraikitra (9-11).
Koa satria nahery vaika ny fanenjehana ny kristiana tamin’izany fotoana izany, dia nahatsiaro ho niara-ory tamin’ireo rahalahiny izay niparitaka noho izany i Jaona.
Izy rahateo dia tao amin’io nosy Patmo io sady tao no nanindrian’ny Fanahy Masina azy mba hanambara ny hafatrin'ny Tompo.
Ny hafatra izay faminaniana dia niainga tamin’ny zavatra efa hitany sy mbola hampisehoana azy ka homena ireo fiangonana fito (11).
Izany hafatra izany dia nentin’i Jaona hampahery ny mpino sy ny hananany faharetana.
Ilay hoe “Anankiray tahaka ny Zanak’olona” dia milaza an’i Jeso Kristy izay tena ain-dehiben’ireo fiangonana fito voalaza ireo.
Ilay tarehin’ny Tompo izay tahaka ny masoandro mamirapiratra dia nampahatsiaro an’i Jaona an’ilay tany amin’ny Matio 17.2 izay niovan’i Jeso tarehy tany an-tandrombohitra. Vavolombelon’izany rahateo izy niaraka tamin’i Petera sy Jakoba.
Ireo sabatra roa lela nivoaka ny vava kosa dia manambara ny Tenin’Andriamanitra (Efesiana 6.17), izay afaka manasaraka ny tsara amin’ny ratsy (Hebreo 4.12, Apokalypsy 2.16).
Tsy misy olona mahajoro eo anatrehan’ny Tompo tokoa sahala amin’izao nanjo an’i Jaona izao. Ny mahafinaritra anefa dia mampitraka antsika izay manaiky Azy hatrany Izy na dia eo amin’ny tsy fahamendrehantsika aza.
Nampahatsiahiviny tsara eto fa efa nandresy ny fahafatesana Izy (18).
Tsy vitan’ny mampitraka fotsiny Izy fa afaka maniraka antsika koa ho mpiara-miasa Aminy hitondra ny hafany.
Manaiky ny ho irakin'ny Tompo ve aho ?
Fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo,
dia manamasina ny tenanareo,
ka dia ho masina hianareo,
satria masina Aho